पर्यटन समाचार अपडेट : Koshi Online
कोरोना महामारीमा खुल्यो झापामा पाँच तारे होटल
विद्युत प्राधिकरणले भन्यो : अग्रिम महसुल तिर्नुस्, छुट लिनुस्
डा. केसीलाई सरकारको आग्रह : ‘अधिकांश माग पूरा हुने चरणमा छन्, सत्याग्रह तोड्नुहोस्’
विराटनगर, १५ असोज । कोरोना महामारीका बीच झापामा पाँच तारे होटल सञ्चालनमा आएको छ । कोरोना महामारीका कारण सञ्चालनमा रहेका होटललाई खर्च धान्नै गाह्रो परेको अवस्थामा झापामा डेढ अर्ब लगानीमा पाँच तारे होट
विराटनगर, १३ असोज । कोरोना महामारीका कारण विराटनगरमा दुई ठूला होटल बन्द भएका छन् । विराटगरमा छुट्टै इतिहास बोकेका होटल नमस्कार र जेनियल होटल बन्द भएका हुन् । विराटनगरको विकासमा दुईवटै होटलको योगदा
चितवन, ११ असोज । कोरोना संक्रमणसँगै बन्द रहेको यहाँको पयर्टन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीले छुटको घोषणा गरेका छन् । सौराहाका पर्यटन व्यवसायीले विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्य
पोखरा, ११ असोज । कोरोना भाइरसका कारण झण्डै छ महिनायता सुनसान बनेको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा यतिखेर भने पर्यटक फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् । पदयात्रा मार्गमा विदेशी पर्यटन नरहे पनि स्वदेशी आन्
दिवा तथा रात्रिकालीन पर्यटक बससेवा सुरु
काठमाडौ, ११ असोज । देशदर्शन बस सेवा प्रालिले पर्यटकलाई लक्षित गरेर दिवा तथा रात्रिकालीन बस सेवा सुरु गरेको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गएपछि
आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने : मन्त्री भट्टराई
शनिबार, १० असोज, २०७७
काठमाडौ, १० असोज । कोरोना संक्रमणको दर कम भए सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ । विगत छ महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्या
मङ्गलबार, ०६ असोज, २०७७
चितवन, ६ असोज । गत चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले बन्द रहेका चितवन सौराहाका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु हिजोआज खोल्ने तयारीमा छन् । व्यवसायीहरुले कभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी होटल सञ्चालन गर्
तीनधारा झरना पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
बनेपा, ६ असोज । पहिले गाईबाख्रा चराउन र घाँस दाउरा गर्न जाने स्थानीयको मात्र भेटघाट हुने गरेको काफलडाँडामा हिजोआज दैनिक एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा मानिसको आवतजावत भइरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकक
पर्यटन मजदुर आन्दोलित
काठमाडौ, ६ असोज । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरुले तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । पर्यटन सेवा समाज नेपाल र पर्यटन मजदुर संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंम
सोमबार, ०५ असोज, २०७७
पोखरा, ५ असोज । लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाइ उडान सुरु भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेको आन्तरिक हवाइ सेवा सुरु भएसँगै व्यवसाय
काठमाडौ, ५ असोज । यती एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सुहलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । एयरलाइन्सले होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा सुलियत दरमा भ्रमण प्
थला पर्ने अवस्थामा सौराहाको पर्यटन
सोमबार, २२ भदौ, २०७७
चितवन, २२ भदौ । नेपालको पर्यटनको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सौराहा कोभिड–१९ का कारण थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । करिब तीन महिनाको लामो लकडाउनपछि विस्तारै होटल सञ्चालनमा आउन थालेको भए पनि पछिल्लो समय ज
बिहिबार, ११ भदौ, २०७७
मुस्ताङ, ११ भदौ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ अत्यधिक जाडो समयमा एक–दुई महिनाबाहेक वर्षैभर चहलपहल हुने स्थल हो । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको स
हलेसीमा हिन्दू र किराँत संस्कारमा आधारित होमस्टे
खोटाङ, ११ भदौ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मालम्बीको संगमस्थल खोटाङको हलेसीमा तीनवटा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित हलेसी विकास समितिको पहलमा स्वदेश तथा विदे
लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीको चिन्ता
सोमबार, ०८ भदौ, २०७७
भैरहवा, ८ भदौ । कोरोना महामारीको संक्रमणबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला विश्व पर्यटनको केन्द्र लुम्बिनीको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि स्थानीयवासी, पर्यटन व्यवसायी र लुम्बिनी विकास कोष हातेमालो
‘बाह्य पर्यटक भित्र्याउन निःशुल्क भिषा र अनिवार्य पीसीआर’
शनिबार, ३१ साउन, २०७७
काठमाडौ, ३१ साउन । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले ‘निःशुल्क भिषा र अनिवार्य पीसीआर’ को नीति अवलम्बन गरे बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिने बताएका छन् । व
बाग्लुङ-पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुल : विश्वकै लामो भएको दाबी
विराटनगर, १७ साउन । पर्वत र वाग्लुङ जिल्ला जोड्ने झोलुंगेपुल सञ्चालनमा आएको छ । विश्वकै लामो भएको दाबी गरिएको पुल सञ्चालनमा आएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय पूर्व
बिहिबार, १५ साउन, २०७७
विराटनगर, १५ साउन । कोरोनो संक्रमणका कारण चार महिनादेखि बन्द रहेका होटल तथा रेष्टुरेन्ट आजबाट खुल्ने भएका छन् । मापदण्ड पूरा गरेर निश्चित होटल व्यवसाय खोल्न दिने गरेको सरकारको निर्णयअनुसार आज
यति एयरलाइन्सको उडान खुलाउने तयारी
बिहिबार, ०८ साउन, २०७७
काठमाडौ, ८ साउन । सरकारले भदौ १ गतेबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै एयरलाइन्सहरुले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् । लकडाउनअघिकै टिकट मूल्य र सुरक्षित तरिकाले उडान भर्न
सोमबार, १९ जेठ, २०७७
काठमाण्डौ , १९ जेठ । लकडाउनको समयमा धावनमार्ग सहित आन्तरिक पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएसँगै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको पर्खाइमा छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्
होटल व्यावसाय धरासायी बनाउँदै कोरोना
सोमबार, १५ बैशाख, २०७७
काठमाण्डौ,१५ बैसाख । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि घाेषणा भएकाे लामो लकडाउनले देशभरिका होटल व्यावसायीहरु मारमा परेका छन । ११ चैतदेखि देश पूर्ण रुपमा लकडाउन भएपछि नेपालम
कोरोना महामारी त्रासले खल्लो भयो नयाँ वर्ष , सुनसान भए पर्यटकिय क्षेत्र
सोमबार, ०१ बैशाख, २०७७
विराटनगर, १ बैसाख । विराटनगर ३ पोखरीयाका निरज कट्टेटले नयाँ वर्षमा काठमाडौं हुँदै पोखरा घुम्न जाने योजना बनाएका थिए । सुनसरी चक्रघट्टीका विष्णु मगर पनि चितवनको सौराह जाने तयारीमा थिए । तर कोरोना
पर्यटक आउन छाडे, व्यवसायीलाई ऋणको चिन्ता
बिहिबार, ०६ चैत, २०७६
विराटनगर, ६ चैत । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण प्रदेश १ का पर्यटकीय क्षेत्रमा आगन्तुकहरूको संख्या घटेको छ । चीनको बुहानसहरबाट फैलिएपछि विश्वव्यापी रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण प्
टाढाबाट आएका मानिस ‘हयाप्पिल्याण्ड’मा रमाएको देख्दा आनन्द आउँछ : मनोज शिवाकोटी ( मनोरञ्जन उद्यमी)
बिहिबार, १७ पुष, २०७६
कसैलाई दुई चार घण्टा टहलिन र रमाइलो गर्न मन लाग्दा प्रदेश एकमा खासै उपयुक्त स्थानहरू थिएनन् । भएका केही ठाउँहरू पनि कि त साँघुरा थिए, कि अव्यवस्थित । केही सामुदायिक वन, सिमसार, चउर र पोखरीहरू पिकनि
भ्रमण वर्ष २०२० : पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार छन् विराटनगरका होटल
बुधबार, १६ पुष, २०७६
विराटनगर, १६ पुस । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ । वर्षभरि मनाइने भ्रमण वर्षमा १ नम्बर प्रदेश सरकारले पाँचलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले बना
बिहिबार, २६ मङि्सर, २०७६
मंगलबारे, २६ मंसिर । बुटवलकी सम्झना घिमिरे सूर्य उदाएको र अस्ताएको हेर्न कै लागि इलामको अन्तु आइन् टोली नै बनाएर । उनलाई इलामको चियाबारी, हरियाली वन जता हेरे पनि रमाइलो र राम्रो लाग्यो । इलाम रमणीय छ
वसन्तपुरको युमा संग्राहलयको उद्घाटन, चोलुङ पार्कमा ४ दिनको बृहत मेला आयोजना हुँदै
मङ्गलबार, २४ मङि्सर, २०७६
सवीन घिमिरे वसन्तपुर, २४ मंसिर । नेपालको रमणीय पर्यटकीयस्थल तेह्रथुमको वसन्तपुरमा अवस्थित चोलुङ पार्कमा बनेको युमा संग्राहलयको उद्घाटन आगामी ५ पुसमा हुने भएको छ । लालिगुराँस नगरपालिकाको सहयोगमा निर्म
होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन पर्यटन मजदूरको माग
मङ्गलबार, १० मङि्सर, २०७६
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपालमा सञ्चालित सबै होमस्टेहरूलाई करको दायरामा ल्याउन पर्यटन क्षेत्रका मजदूरहरूले माग गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन यूनिट्राभद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सोसियल ड
चुलीपोखरीको पर्यटकीय महत्त्व फैलाउन स्थानीय सक्रिय
आइतबार, ०१ मङि्सर, २०७६
विराटनगर, १ मंसिर । मोरङको उत्तरी क्षेत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ मा रहेको रमणीय चुलीपोखरीको पर्यटकीय महत्त्व फैलाउन स्थानीय सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । चुरे पहाडी क्षेत्रमा पर्ने झण्डै ५ बिगाहा क्षेत्र
पर्यटन पत्रकार संघको अध्यक्षमा पन्त
शनिबार, ३० कार्तिक, २०७६
काठमाडौं ३० कात्तिक । पर्यटनका क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको संस्था पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल)को आठौं वार्षिक साधारण सभा एवं पाँचौ महाधिवेशनले देवीप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्
पाँचथरको लालीखर्कमा होमस्टे संचालन
शनिबार, ११ असोज, २०७६
पाँचथर , ११ असोज । पाँचथरको लालीखर्कमा होमस्टे सेवा संचालन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसरमा पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–३ लालीखर्कमा शुक्रबारदेखी सामुदायिक ‘
दशैंमा घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? प्रदेश १ का यी गन्तब्य उपयुक्त हुनसक्छ !
शुक्रबार, १० असोज, २०७६
विराटनगर, १० असाेज । दशैंको विदामा परिवार तथा साथीभाइसँग घुम्न जाने हाम्राे परम्परा पुरानै हो । आर्थिक हैसियत अनुसार योजना बनाएर दशैं यात्रा गर्न उपयुक्त हुन्छ । दशैंमा घुम्नकालागि प्रदेश नम्बर १
श्री एयरलाइन्सको चाडपर्व अफर : ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट
सोमबार, ०६ असोज, २०७६
काठमाडौं, ६ असोज । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले जेष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । दशैं, तिहार तथा छठका अवसरमा कम्पनीले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५०
पर्यटक पर्खँदै बसन्तपुरको ‘चो?लुङ’ पार्क (फोटोफिचर)
बिहिबार, ०२ असोज, २०७६
नेपालको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल तिनजुरे, मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रको प्रवेशद्वार भनिने तेह्रथुमको वसन्तपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र हो । यस क्षेत्र वरपरको गुराँसे पर्यटकले विश्वकै
उदयपुरमा पनि प्याराग्लाइडिङ उडानकाे तयारी, ५० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
गाइघाट, १८ भदौ । उदयपुरमा प्याराग्लाइडिङ उडान शुरु गर्ने तयारी भएको छ । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाले प्याराग्गाइडिङ उडान सञ्चालनको तयारी गरेको हो । नगरपालिकाले बृहत् पर्यटन विकासलाई अगाडि बढाए
नेपालका बारे राेचक तथ्यहरू
विराटनगर, १३ भदौ । संसारमा नेपाल मात्र एउटा देश हो, जसको राष्ट्रिय झन्डा चारपाटे नभएर त्रिकोणात्मक आकारको छ । नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो, जुन समुन्द्र सतहको उचाई ६० मिटर देखि ८८४८ मिटर उचाईसम्म फैल
मोरङ ब्यपार सँघले थाल्यो दश हजार बिरुवा रोप्ने अभियान
शनिबार, ३२ साउन, २०७६
बिराटनगर ३२ साउन । मोरंग व्यापार संघले दश हजार बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरेको छ । ३१ साउनमा कटहरी गाउँपालिका स्थित सूर्यदल गण, थलाहा व्यारेकमा एक हजार बिरुवाहरु रोपेर मोरग व्यपार संघले अभियान सुरु
ग्रामीण पर्यटनका ‘क्रस बोर्डर’ अभियन्ता
शनिबार, २५ साउन, २०७६
ग्रामीण पर्यटन र वातावरणमा विद्याबारिधी (पीएचडी) गरेर भारत सरकारको उच्चतहको जागिर छाडेका राज बसु (५७) अनि नेपाली सेनाको जागिर छाडेर चिया खेतिमा सहभागी भएर पर्यटनको विकासमा लागिपरेका नेपालका अर्जुन कार
प्रदेश सवारी कानून बनाउन माग
शुक्रबार, २४ साउन, २०७६
बिराटनगर । एक नम्बर प्रदेशकालागि चाँडै सवारी कानून निर्माण गर्न साँसदहरुले माग गरेका छन । प्रदेशको आफनै कानून नहुदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या बढदै गएको भन्दै चाँडो कानून निर्माण गर्न साँसदहरुले सरक
बर्जुतालमा विद्यार्थीको भ्रमण
कोशी अनलाइन विराटनगर १९ साउन । बिराटनगरको बिभिएस प्लस टु बिद्यानलयका एक सय बिद्यार्थीले सुनसरीको बर्जुताल भ्रमण गरेका छन । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी लिन
विराटनगर अध्यागमनमा सेवा लिन सेवाग्राही पुगेनन्
बिहिबार, १६ साउन, २०७६
कोशी अनलाइन / विराटनगर, १६ साउन पर्यटन व्यवसायीहरुको निरन्तरको मागपछि विराटनगर–जोगबनी नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएपनि सेवा लिने सेवाग्राही चाँही पुगेका छैनन् । अध्यागमन स्थापना भएको जानकारी न
एकसातामै दुई पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा कामिरिताको तोडियो रेकर्ड
मङ्गलबार, ०७ जेठ, २०७६
काठमाण्डौं । एक सातामा २ पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन् । सगरमाथाको २४ औं सफल आरोहण गर्दै नयाँ कीर्तिमान राखेका हुन् । एक साताअघि आफैले राखेको २३ औ
गुराँसको राजधानी’ : तीनजुरे मिल्के जलजले (फोटो फिचर)
शुक्रबार, २७ बैशाख, २०७६
बसन्तपुर। गुराँसको राजधानीका रूपमा परिचित तिनजुरे मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि परिचत गन्तव्य हो । विश्वमा पाइने ४२ मध्ये टिएमजे क्षेत्रमा मात्र २८ प्रजातिका गुराँस
पर्यटकलाई स्वागत गर्न तालिम दिनु पर्ने : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, चैत २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालप्रति पर्यटकको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन विमानस्थलका कर्मचारीको व्यबहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० मूल आय
रत्नाको विद्युत कटौती नगर्न उच्च अदालतको आदेश
शुक्रबार, २२ चैत, २०७५
विराटनगर, चैत्र २२ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्यन गर्न अटेर गरिरहेको रत्ना होटल विराटनगरको विद्यूत आपूति बन्द नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चको फैसला क